Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A April 2012 (3)
Q and A April 2012 (3)
1. ကျွန်တော် ချစ်သူက သူ့ နာခေါင်းက မလှလို့ဆိုပြီး
2. Aqueous Crystaline Penicillin (G) နှင့် Aqueous Crystaline Penicillin (V) ထိုးဆေးနှစ်မျိုးဟာ
3. ကျမလည်း ဒီအလာဂျီနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်လာတာ
4. ကျနော့်ခြေထောက်မှာ ပွေးရောဂါလိုဖြစ်တာကြာပြီ၊
5. ခါးက နေ့တိုင်းနာနေတာကို ဘယ်လိုဆေးသုံးရမည်နည်း။
Tue, Apr 24, 2012 at 7:12 AM
ကျွန်တော် ချစ်သူက သူ့ နာခေါင်းက မလှလို့ဆိုပြီး ခွဲစိတ်ခွဲသချင်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီလို နာခေါင်း ခွဲစိတ်ကုသထားတဲ့လူမှာ ကျမ်းမာရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဘာတွေများ စိုးရိမ်ရပါသလည်း။ မျက်နှာခွဲစိတ်ကုသတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ နောက်ပိုင်း ဆိုးကျိုးက ဘာတွေဖြစ်ပါသလည်း။ အဲဒီလို နားခေါင်း ခွဲစိတ်ကုသထားတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ နားခေါင်း အနံ့ခံတဲ့အပိုင်း ကရောပုံမှန်ပဲလား။ ချက်တဲ့အခါ ကြော်တဲ့အခါ ညှော်နံ့တွေရတဲ့အခါ အန္တရာယ်ရှိပါသလား။ တခြားဘာတွေများ ဖြစ်နီုင်ပါသေးလည်း။
Tue, Apr 24, 2012 at 10:04 AM
ကျမလည်း ဒီအလာဂျီနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်လာတာ ၁ နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီ။ ကျမဆေးရုံသွားပြတော့ ဆရာဝန်က FENAFEX ဆေးပေးလာတယ်။ သောက်လိုက်ရင်သက်သာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးကုန်သွားတဲ့အခါ ပြန်ဖြစ်တယ်။ တခါတခါ နာချီရင် နေ့တ၀က်လောက် ကြာတယ်။ ပြီးတော့ နှာရည် (အဖြူရောင်) ပါယိုတယ်။ ဒီလိုနဲ့ဘဲ သံသရာလည်လာတာ ၁ နှစ်ခွဲပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီရောဂါအမြစ်ပြတ်တဲ့ဆေးရှိပါသလား။ ဘယ်လိုမှ မပျောက်နိုင်တဲ့အတွက် ဆရာညွန်ကြားတဲ့ဆေးကို ပြောင်းသောက်ကြည့်ချင်တယ်။ တကယ်လို့ သောက်မယ်ဆိုရင် Cetirizine hydrochloride ဆေးတမျိုးတည်း သောက်ရင်ကော ရပါသလား။
အလာဂျီနှာခေါင်းကို ဖတ်ပြီးပြီလားတော့ မသိပါ။ ဆေးက ၃ မျိုးလိုတယ်။ ဆေးတွေကလဲ စားဆေး၊ နှာခေါင်းထည့်ဆေး နဲ့ မျက်စဉ်းတွေရှိတယ်။ ဒါတင်မက လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းဘို့လဲ လိုနိုင်တယ်။
Aqueous Crystaline Penicillin (G) နှင့် Aqueous Crystaline Penicillin (V) ထိုးဆေးနှစ်မျိုးဟာ ကွာခြားမှုရှိပါသလဲ။ (G) အစား (V) ကို အစားထို၍သုံးလို့ ရပါသလား။
Penicillin ဆိုတာ G ဆိုရင် ထိုးဆေး၊ V ဆိုရင် စားဆေးဖြစ်တယ်။ ဆေးစာကို အသေအခြာ ဖတ်ပါအုံး။
Procaine penicillin G 600,000 U mixed with crystalline penicillin G 200,000 U IM
Aqueous crystalline penicillin G 1,000,000 U IM mixed with procaine penicillin G 600,000 U IM
Penicillin V tablet ဆိုပြီးလာတယ်။ လိုအပ်ရင် ထပ်မေးပါ။
Mon, Apr 23, 2012 at 2:58 PM
ကျနော့်ခြေထောက်မှာ ပွေးရောဂါလိုဖြစ်တာကြာပြီ၊ ၂ နှစ်ကျော်နေပြီ။ ဆေးလိမ်လည်း မသက်သာဘူး။ ဆေးသောက်ရင်လည်း မသက်သာဘူး။ Griseofullavin ဆေးလည်း ၃ ပတ်လောက်သောက်ပြီးပြီ မသက်သာဘူး။ Clotrimazone ရယ် Hydrocontisone လိမ်းဆေးတွေလည်း လိမ်လာခဲ့တာကြာပြီး မသက်သာနိုင်ဘူး။ အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်သွားမှာကိုလည်း စိုးရိမ်လို့။
• Fungal infections မှိုအမျိုးမျိုး ဆေးအမျိုးမျိုး http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/10/fungus.html